तर एक नोट साझा गर्दै करणले लेखेका छन्, "नमस्ते, 'कफी विथ करण' को ६ सिजनहरू मेरो र तपाईंको जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ। तर अहिले मैले दु:खको साथ भन्नुपर्छ कि 'कफी विथ करण' अब फर्किँदैन ।" करणको यो पोस्टबाट फ्यानहरु निकै निराश भएका छन् । करणको यो पोस्टमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘एक युगको अन्त्य ।' अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, "करण, के तपाई हामी रोएको चाहनुहुन्छ?" तेस्रो प्रयोगकर्ता लेख्छन्, "के त्यहाँ ट्विस्ट छ? के यो सत्य हो? के भइरहेको छ?" योसँगै धेरैले केएल राहुल र हार्दिक पाण्डेयलाई सम्झेर लेखेका छन्, ‘सबैभन्दा खुशी हार्दिक पाण्ड्या र केएल राहुल हुनुपर्छ ।
टक शोको पहिलो सिजन 2004 मा प्रिमियर भएको थियो । यसमा शाहरुख खान र काजोल विशेष अतिथिको रूपमा थिए। यो शोमा सलमान खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, सोनम कपूर, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, ट्विंकल खन्ना, रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, सञ्जय दत्त, एकता कपूर, जोनजस्ता सेलिब्रेटीहरू थिए। अब्राहम, लारा दत्त र अन्य धेरै अतिथिको रूपमा शोमा देखा परेका छन्।